ठीक समयमा आएको “कहिल्यै बिर्सन नसकिने” साधन | हाम्रो अभिलेखालयबाट
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली एफिक एस्टोनियन ओरोमो काजाक किकुयु किन्यारवान्डा किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मले मालागासी माल्टिज म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिलिगेनोन
ठीक समयमा आएको “कहिल्यै बिर्सन नसकिने” साधन
“कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ!” “सृष्टि नाटक” (जर्मन) हेरेपछि थुप्रैको प्रतिक्रिया यस्तै थियो। ठीक समयमा आएको त्यस नाटकले दर्शकहरूमा अमेट छाप पाऱ्यो। हिटलरले युरोपका यहोवाका सेवकहरूमाथि भीषण सतावट ल्याउनुभन्दा केही समयअघि “सृष्टि नाटक”-ले असङ्ख्य मानिसलाई यहोवाबारे व्यापक साक्षी दियो। तर “सृष्टि नाटक” के थियो?
नयाँ नाटकको नाम जर्मन भाषाको सोपफङ्ग (सृष्टि) किताबमा आधारित थियो
सन्‌ १९१४ मा अमेरिकाको न्यु योर्कको ब्रूक्लिनस्थित यहोवाका सेवकहरूको मुख्यालयले “सृष्टिसम्बन्धी फोटो-नाटक” (अङ्ग्रेजी) विमोचन गऱ्यो। आवाजसहितको त्यस नाटकमा रङ्गीन स्लाइड र चलचित्र थियो। आठ घण्टाको त्यो नाटक संसारभरका लाखौं मानिसले हेरे। त्यस नाटकको छोटो संस्करण “युरेका नाटक” (अङ्ग्रेजी) पनि सन्‌ १९१४ मा नै विमोचन गरियो। तर सन्‌ १९२० को दशकसम्ममा स्लाइड, रिल र नाटकमा प्रयोग गरिने उपकरण कामै नलाग्ने भइसकेका थिए। तैपनि “फोटो-नाटक”-को माग बढ्दो थियो। जस्तै:- जर्मनीको लुडभिक्सबर्गका मानिसहरूले यस्तो प्रश्न गरे, “‘फोटो-नाटक’ फेरि कहिले देखाउने?” त्यसोभए के गर्न सकिन्थ्यो?
नाटकको बढ्दो माग पूरा गर्न जर्मनीको मेग्डेबर्गको बेथेल परिवारका प्रतिनिधिहरूले सन्‌ १९२० को दशकमा फ्रान्सको पेरिसस्थित समाचार एजेन्सीबाट रिलहरू किने। अनि लिपजिग र ड्रेसडेनका ग्राफिक्स कम्पनीहरूबाट स्लाइडहरू किने। यी रिल तथा स्लाइडलाई पुरानो “फोटो-नाटक”-का काम लाग्ने स्लाइडसँग मिसाइयो।
प्रतिभाशाली सङ्गीतकार भाइ एरिक फ्रस्टले नाटकको लागि सङ्गीत रचे। नेपथ्यकारले भनेका केही कुरा सृष्टि (जर्मन) किताबबाट लिइएको थियो। त्यसकारण “फोटो-नाटक”-को संशोधित संस्करणलाई “सृष्टि नाटक” भन्ने नयाँ नाम दिइयो।
त्यो नयाँ नाटक पनि “फोटो-नाटक”-जस्तै आठ घण्टा लामो थियो। त्यो नाटक हरेक साँझ भाग-भाग गरी देखाइयो। त्यसमा सृष्टिका दिनहरूबारे रोमाञ्चक विवरणका साथै बाइबल इतिहास तथा मानव इतिहास प्रस्तुत गरिएको थियो। अनि झूटो धर्मले मानिसहरूको भरोसा तोडेको विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको थियो। जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड, लक्जमबर्ग, अस्ट्रियालगायत जर्मन भाषा बोल्ने मानिसहरू भएका सबै ठाउँमा “सृष्टि नाटक” देखाइयो।
एरिक फ्रस्ट र “सृष्टि नाटक”-को लागि तिनले रचेको सङ्गीतको नोट
एरिक फ्रस्टले यसो भने: “मैले खासगरि वाद्य समूहका साथीहरूलाई नाटकको मध्यान्तरमा दर्शकहरूकहाँ गएर हाम्रा किताब र पुस्तिकाहरू दिन प्रोत्साहित गरें। यसरी हामीले घरघरको प्रचारमा भन्दा धेरै साहित्य दिन सक्यौं।” पोल्याण्ड र हालको चेक गणतन्त्रमा नाटक प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाएका योआनेस राउटाले बताएअनुसार थुप्रै दर्शकले आफ्नो सम्पर्क ठेगाना दिए। ती ठेगानाहरूले गर्दा फलदायी पुनःभेट गर्न सकियो।
सन्‌ १९३० को दशकमा “सृष्टि नाटक” देखाइँदा हलमा दर्शकहरूको घुइँचो लाग्थ्यो। नाटक देखाइएका सहरहरूमा यहोवाका साक्षीहरू चर्चाको विषय हुन्थे। जर्मनी शाखा कार्यालयले आयोजना गरेको नाटक सन्‌ १९३३ सम्ममा लगभग १० लाख मानिसले हेरिसकेका थिए। केट क्राउस सम्झन्छिन्‌: “नाटक हेर्नलाई मात्र हामीले पाँच दिन ओहोरदोहोर गऱ्यौं। जङ्गल, उकाली-ओराली अनि खोच हुँदै यात्रा गऱ्यौं। नाटक हेर्ने ठाउँमा पुग्न १० किलोमिटर हिंड्नुपर्थ्यो।” एल्जा बिल्हार्टस भन्छिन्‌: “‘सृष्टि नाटक’-ले गर्दा मैले सत्यलाई माया गर्न थालें।”
त्यस नाटकले आफ्नी आमामा पारेको प्रभावबारे अल्फ्रेड अल्मेनडिन्जर यसो भन्छन्‌: “उहाँ यत्ति उत्साहित हुनुभयो, उहाँले बाइबल किन्नुभयो अनि ‘पापमोचनस्थान’ भन्ने शब्द खोज्नुभयो।” बाइबलमा त्यो शब्द नभेट्टिएकोले तिनी चर्च जान छोडिन्‌ र बप्तिस्मा गरिन्‌। एरिक फ्रस्ट भन्छन्‌, “‘सृष्टि नाटक’-ले गर्दा असङ्ख्य मानिस सच्चाइमा आए।”—३ यूह. १-३.
“सृष्टि नाटक” व्यापक रूपमा प्रस्तुत गरिएको केही समय नबित्दै युरोपमा नाजी शासनले प्रभुत्व जमाउन थाल्यो। सन्‌ १९३३ को सुरुतिर जर्मनीमा यहोवाका साक्षीहरूको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसबेलादेखि सन्‌ १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त नहोउन्जेल युरोपका यहोवाका सेवकहरूलाई घोर सतावट दिइयो। एरिक फ्रस्टलाई करिब आठ वर्ष जेलमा हालियो। तर तिनी बचे र जर्मनीको वाइजबाडनको बेथेलमा सेवा गरे। ठीक समयमा आएको कहिल्यै बिर्सन नसकिने “सृष्टि नाटक”-ले थुप्रै भाइबहिनीलाई दोस्रो विश्वयुद्धको दौडान विश्वासको परीक्षा सहने बल दियो।—जर्मनीको हाम्रो अभिलेखालयबाट।
यो वर्ष “सृष्टिसम्बन्धी फोटो-नाटक” पहिलो पटक देखाइएको १०० वर्ष पुग्यो। बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने कुरामा मानिसहरूको विश्वास बलियो बनाउन यो चलचित्र तयार पारिएको थियो।